Qarashka xasuusinta deynta CSN oo aad u badan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Jessica Gow/TT.
Qarashka xasuusinta deynta CSN oo aad u badan
''Caqli gal ma ahan xasuusin intaasi la eg''
La daabacay fredag 4 november 2016 kl 12.35
Waxay kugu kaceysaa qarash badan hadaad fududeysatid waraaqda dib u bixinta deynta hay’adda CSN.
Sannadkii hore waxaa la kordhiyay khidmada xusuusinta bixinta deynta waxbarashada ee CSN taasi oo laga dhigay 450 kr halkii ay awel aheyd 200 kr.
Theodor Kjellingland oo ka mid aradada dhigata jaamacadda Stockholm ayaa kordinta lacagta xusuusinta ee marka aad ilowdo bixinta deynta waxbarashada CSN ku tilmaamay mid aan caqli gal ahayn aadna u xun.
Hase yeeshee Jan Söderholm oo ah madaxa qeybta dhaqaalaha ee CSN ayaa difaacay kordhinta khidmada xasuusinta isaga oo sheegay in haddii deyn qaatayaasha aysan ku bixin lacagta xilliga laga doonayo in taasi ay horseedeyso in loo baahdo in cashuur bixiyayaal kale ay dhiibeen lacagta si uu u sii jiro hanaanka kaalmo bixinta waxbarashada.
Kordhinta lacagtan ayaa abuurtay isbedel wax ku ool ah, iyada oo imminka dad badan lacagta ku bixiyeen wakhtigeeda sidoo kalana isbedel laga dareemi karo qasnada dowlada.
Sanadkii 2014 qasnada dowlada waxaa soo gashay 275 Milyan karoon oo ah lacagaha xasuusinta ee deynta waxbarashada kolka aad ilowdo in aad bixiso balse sanadkii ina dhaafay ee 2015 ka dib markii la kordhiyay khidmada xasuusinta, ayaa iyana waxaa si weyn u korortay lacagta qasnada dowlada ee ka soo xaroota xasuusintaasi.
Lacag gaareysa 592 milyan karoon oo ah khidmada xasuusinta ayay bixiyeen deyn qabayaasha CSN ee qeybta deynta waxbarashada, waana lacag labo jibaar ah tii sanadkii 2014-ka.
Theodor Kjellingland, ardayga dhigta jaamacadda Stockholm ayaa qaba aragti ah in qofka uu caroonayo marka ay u timaado warqad xasuusin ah oo ah 450 karoon, isaga oo sheegay in isaga qudhiisaba uu ka carooday. Balse waxa uu sheegay haddii qofka uu dadaalo, in ay jirto fursad uu kaga badbaado in loo soo dirsado qarash intaasi la eg.
Theodor ayaa tilmaamatilmaamay in qofka deynta lagu leeyahay ee mishaakil xagga dhaqaalaha uu la soo darso uu sammeyn karo in uu la xariiro dowlada si uu helo caawinaad.